शरीरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले रगत चुस्दा भएको हो त ? « Online Sajha
साँझ सुतेर बिहान उठ्दा कहिलेकाहिँ तपाईंको शरीरमा निलो दाग देखिन्छ रु यस्तो दाग दुख्छ पनि होला १ तर, के तपाईंलाई थाहा छ कि यस्तो दाग र चोट किन लाग्छ ?
नेपाली समाजमा त बोक्सीले रगत चुसेका कारण शरीरमा यस्तो दाग देखिन्छ भन्ने माान्यता पनि छ । के तपाईं पनि यस्तै सोच राख्नुहुन्छ रु यदि शररीमा देखिएको दाग–धब्बालाई बोक्सीले रगत चुस्दा भएको मान्‍यता राख्नुहुन्छ भने यो एउटा अन्धविश्वास मात्रै हो ।
चिकित्सकहरु शरीरमा यस्तो निलो दाग ८ ओटा कारणले देखिन सक्ने बताउँछन् । ती ८ कारण निम्नानुसार छन्,
वोन विलिब्रान्ड रोग एक यस्तो अवस्था हो, जसमा अत्यधिक र विस्तारित मात्रामा रक्तश्राव हुने गर्छ । यो रोग वोन विलिब्रान्ड नामक प्रोटिनको स्तरमा रगतको कमिका कारण लाग्ने गर्छ । यो समस्याबाट पीडित व्यक्तिको शरीरमा सामान्य चोट लाग्दा पनि शरीरमा ठूला निलडाम देखिने गर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
रेडक्रस र गाउँपालिकाको साझेदारीमा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण
डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा टोली गठन
चिकित्सक संघद्वारा आन्दोलनको घोषणा, आकस्मिक र कोभिड–१९ बाहेकका सेवा बन्द हुने
कालो चियाले हुन्छ शरीरलाई फाइदा
मुसालाई गोल्ड मेडल !!
वडा अध्यक्ष क्षेत्रीद्धारा दशैँ भत्ता फिर्ता
बुटवलमा थप एक जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु